Iindaba-Uyithenga njani imvula yemvula
Kukho iindidi ezi-4 zezinto zokwenza imvula, nganye kuzo inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga, ezinokuthengwa ngokweemeko ezikhoyo. Nika ingqalelo ukwahlula ukuba ngaba ilaphu le-raincoat lisetyenzisiwe kwakhona. Izinto ezirisayikilisweyo zinephunga elikhethekileyo, iglu kunye nelaphu zinamandla angadibaniyo, iglue imhlophe, kwaye iya kubuna kwaye iyacola xa isetyenziswa.
Umsebenzi wengubo yemvula nawo ubaluleke kakhulu. Ukuba ubude be-raincoat bukhulu kakhulu, ukuphakama komthungo akuhambelani, ukutywinwa akukho mgangatho, kwaye unyango lokulwa nokuvuza alwamkelwanga, kulula kakhulu ukuba ungene emvuleni.
Izimbo zeRaincoat ngokubanzi zithetha iingubo zemvula ezinde, iziqwenga zemvula ezahlukileyo kunye neekapa (iingubo), isiqhekeza esinye (eside) kulula ukusibeka kunye nokususa amanzi kodwa ukungabinamanzi, uhlobo lokwahlulahlula alunamanzi, iponcho ilungele ukukhwela ibhayisikile ( iibhayisekile zombane, iibhayisekile) Linda).
Xa uthenga iidyasi, kufuneka siqwalasele ngokupheleleyo intuthuzelo nokuphefumla. Ukuba ibhatyi yemvula yenzelwe ukukhusela imvula kuphela, kodwa ayiphefumli, xa umzimba utywinelwe ukugubungela umzimba womntu, ubushushu emzimbeni abunakuphelelwa, ngaphandle kupholile kwaye ngaphakathi kushushu, kwenza ukuqokelelana kwamanzi nokumanzisa Umaleko wengubo yemvula.
Iidyasi zinobukhulu obahlukeneyo, ke abathengi bayacetyiswa ukuba bajonge ubungakanani betafile xa bethenga iingubo zemvula. Kungcono ukuzama kubo. Zama ukuthenga ezinkulu ukuze zisetyenziswe nokuba unxibe ngakumbi iimpahla zasebusika.
Umgaqo osisiseko wokungangenisi amanzi kwi-raincoat ilaphu + lokwaleka. Iindidi eziqhelekileyo zokwaleka kubandakanya i-PVC (i-polyvinyl chloride), i-PU, i-EVA, njl njl njl njl njl. Ukuthintela ukucaphuka kolusu, iingubo zemvula ezibotshwe nge-EVA ziyacetyiswa.
Kule mihla, mininzi imibala yeebhatyi zemvula, kwaye izimbo ziyatshintsha, kubandakanya isitayile saseBritane, isimbo se-retro polka dot, umbala oqinileyo, umbala, njl njl.